FAQs - Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 7 maalmood. Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag-bixinta dhigaalka. Waqtiyada hogaanka ayaa wax ku ool noqda marka (1) aanu helnay deebaajigaagii, iyo (2) waxaanu haysanaa ogolaanshahaada ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii wakhtiyada hogaanka aanu ku shaqaynayn wakhtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ku gudub shuruudahaaga iibkaaga. Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga. Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.
Qiimaha dhoofintu wuxuu ku xiran yahay habka aad u dooratay inaad alaabta ku hesho. Express sida caadiga ah waa kan ugu dhaqsiyaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Baabuurta xamuulka qaada ayaa ah xalka ugu fiican ee xaddi badan. Qiimaha xamuulka sida saxda ah waxaan ku siin karnaa kaliya haddii aan ogaano faahfaahinta qadarka, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma rabtaa inaad nala shaqeyso?